In da'dan oo casri ah, lahaanshaha Android ama iPhone ma aha heshiis weyn. Laakiin wax isbedel batari ay ayaa had iyo jeer dhibaato. Maalmihii marka telefoonada gacanta ee lacag hal socon karo muddo wiig ah tageen in Zaman this of technology cusub. Haddii aad ka cabanayso arrimaha ku lug leh mareenada batteriga iyo dhawraa ku weydiinaya sababta manufactures ma kordhiyo tayada shaqo ee ay nolosha batari, marna ma dhacday inaad naftaada weydiiyay sida hufan aad ku sugan tahay adiga oo isticmaaleya isticmaale qalabka casriga ah ama iPad? Inaad horey u badan tahay ayaa sheegay inaysan jirin.
Waa maxay sababta aan Ipad / Iphone / Android Phone Battery geeriyooday Fast?
Qalabka casriga ah iyo casriga maanta waa sida kombiyuutaro jeebka buux in laguu suurogeliyo in aad ku raaxaysan muuqaalada iyo barnaamijyadooda qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, muddo batari ah qalabka ayaa weli in ay kor u qabtaan tan iyo isticmaalka batari sare loo isticmaalo, kuwaas oo muuqaalada iyo barnaamijyadooda. Waxaa jira sababo badan oo aad batteriga dhinto si dhakhso ah. First of dhan, laga yaabaa in aad u furay codsiyada aad u tiro badan, sida Skype, Rasuulka, KIK App, Viber, iyo wax ka badan. Labaad, waxaa laga yaabaa inaad u Jeediyey aad raadraaca GPS, Wi-Fi oo Bluetooth. Saddexaad, laga yaabo in aad ku eedeeyay aad batteriga ka dib markii ay si buuxda u soo saaro ay awood. Tan afraad, laga yaabo in aad illowday in aad aad hoos ugu dhalaalka shaashadda. Chine Kuwani iyo muuqaalada ku baabbi'iyee awood batari aad.
Ogow Battery Top 5 Optimizer Wixii Android:
Waad ogtahay nolosha batari Android ma waarto, laakiin waxaa mahadaas iska leh horumarinta kuwaas oo helay mid hababka lagu kobciyo oo la kordhiyo nolosha ah baytariyada aad Android iyada oo noocyada kala duwan ee optimizers batteriga.
Tani waa si buuxda u saftay ayna batteriga iyo maamulka qalab. Waxuu kuu sheegayaa wakhtiga saxda aad u isticmaali kartid app hor batteriga ha lagaga miiro meesha doonaa. Waxaa baara habka si loo siiyo macluumaad ku saabsan codsiyada iyo hawlaha kuwaas oo inta badan aad batteriga baabbi'iya.
Waxaa Sarre nolosha aad batteriga oo siinaya macluumaad ku saabsan widgets / barnaamijyadooda in aad ugu wada baabbi'iyey.
Waxaa hanta barnaamijyadooda ugu wada baabbi'iyey marayo hababka ugu waxtarka badan.
Waxay ku talinaysaa maamulka ama keydinta awood qorshayaal kor loogu qaado noloshaada batteriga.
Waxay muujinaysaa horumarka iyo xaaladda oo aad batteriga mar walba.
Waxa aanu diiwaan kharash buuxa taariikhda
Waxaa hakad HAWLGALLADU ay sabab u tahay farsamo gacanta lagu
Tani waxa weeyi ugu optimizer ka batari hal abuur leh u Android sababta oo ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay screen guri u ayna batteriga.
Waa codsi aad u sahlan, sababtoo ah waxaa la sameeyey la heli karaa shaashadda guriga kaliya
Waxaad la socon kartaa oo dhan barnaamijyadooda socda
Waxaad si joogto ah xiri karaan barnaamijyadooda aad rabto in aad si joogto ah u ordaan
Wararka ku saabsan heerka batari hadda
Dishaa socda geedi socodka soo jeeda
Waxa uusan ku wargelinin markii batari waa ka yar 20 boqolkiiba
Waxay qaadataa waqti ay ku shuban
Tani waxay bixisaa badan qaababka lacag la'aan ah. Waxaad awoodaa inaad tayadoodii batari mid-tuubada keydinta awoodda in ay isbedesho goobaha si toos ah. Intaa ka dib, waxaa lagugu soo wargalin doonaa haddii awood batteriga gaadho wax ka yar 20%.
Waxa ay muujinaysaa in ay boqolkiiba batari sax ah
Kordhiyay nolosha batari
Waxay leedahay dilaaga hidi in la joojiyo Chine oo gubtay ugu xooggiinna
Wanaajinaysaa qaab batteriga iyo kordhisaa xawaaraha qalab ee
Aan la ogeysiiyo in aad marka ay si iskood ah gabagabeynayo Chine ee
# 4 Care Advanced Mobile
Waa qaab oo ayna ammaanka app ah Android bixiya muuqaalada yihiin in si sahlan loogu batteriga.
Samaynaya baaritaano virus-waqtiga dhabta ah
Waxay leedahay atomaatig Game u bilowdo kulan
Taageerada kulan ay u quman aan qaska
Nolosha Battery iyo waxqabadka ma aha dareemi
Ma sheegin marka batari hoose waa 20 boqolkiiba.
# 5: Easy Battery Saver
Tani waa app ah Android in loogu talagalay in lagu kordhiyo nolosha aad batteriga. Waxaa jira afar doorasho diyaar u noocan oo kale ah: Advanced kartoo Mode, Super Power Saving Mode, Mode caadiga ah iyo General Saving Mode.
Simple ay shaqeeyaan oo ay user saaxiibtinimo
Aad u dabacsan sida ay bixisaa afar doorasho noocyo
Kordhiyay nolosha batari si hufan
The Top 5 batari optimizer u iPad / iPhone
Haddii Android nolosha batari ma waarto, iPad iyo iPhone ma aha marka laga reebo ah in xukunka. Nasiib wanaag, weli waxaad kordhin karo nolosha batari ku dul isticmaalayo iyada oo shantii barnaamijyadooda ugu fiican.
Tani waa wax soo saarka si buuxda u saftay in bixisaa macluumaad dhamaystiran oo aad batteriga. Iyadoo app this, buuxinta lacag wareegga buuxa sahlanaan lahaa.
Kaliya App wuxuu taageeraa Charge Cycle Full
Waa app batari ugu sax ah
Waxa aanu hubi ma barnaamijyada orodka in ay yihiin dheecaan telefoonka
Waxa aanu qabsadaan goobaha xoojinaysa nolosha batari aad u
Waxaa ma ayan tilmaamin in lacag ayaa dhameystirtay
Tani muhiimad ahaan waa qalab aad muhiim u ah in aad qalabka iPhone iyo iPad, sida ay tahay xirfad dheeraad ah. Waxa kale oo ay ka ilaaliya iyo haysaa aad batteriga.
Wuxuu ka hortagaa batteriga ku ool ah
Waxay leedahay xaalad howlgal nidaamka saaxiibtinimo
Waxay siisaa qalab badan iyo talooyin aad ku caawin dhowraan nolosha batteriga.
Weydii in aad tirtirto xijiyaan ama isku dayo in meesha laga saaro junk
# 3: Maareeyaha SYS Activity
Tani waa app guud loogu tala galay si ay ula socdaan Xasuusta, digsi, shaqeyta, Battery, Network, Performance iyo Device Stat in iDevices oo dhan.
Waxay bixisaa talooyin fudud oo waxtar leh oo ku saabsan sida ay u badbaadin aad batteriga
Waxay bixisaa muuqaalada utility xorta ah
Waxay sheegaysaa xawaaraha internet-
Ma bixin button xusuusto cad
No button xasuusta tusay screens
Waa aalad in ay muujinaysaa heerka batari hadda aaladaha macruufka dhex tilmaame bar ah iyo wax soo saarka boqolkiiba. Waxaa la arkaa in ay app batari ugu kalsoonaan karo.
Waxay ku tusaysaa heerka mas'uul batteriga in boqolkiiba
Waxay leedahay muujinta a Dayactirka weyn
Waxay siisaa faahfaahinta buuxda: hartay markii kharash iyo digniino marka si buuxda loo soo oogay
Tani waa codsiga oo dhan waqti ah in aad bixisaa dhammaan macluumaadka qarsoon. Sidaas darteed, kormeerka wax-qabadka aad oo dhan qalabka aad.
Codsiga waa fududahay in ilaa iyo isticmaali
Interface user Waa wax fudud in falgali
Waxtarka leh ee raad macruufka 5
Waxay bixisaa talooyin waxtar u leh ayna batari
Feature Data qaadata waqti ay ku shuban
> Resource > macruufka > 10 Battery Optimizer u Android iyo macruufka Devices